अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तैँले मसँग सङ्गति गर्न, मसँग घनिष्ट रूपले कुराकानी गर्न, आफैले खान र पिउन, अनि परमेश्‍वरको नजिक हुन सक्षम हुनु हो। तैँले आत्मिक कुराहरूलाई जति सक्दो चाँडो बुझ्‍नुपर्छ र आफ्‍नो वातावरण र तेरा वरिपरि के बन्दोबस्त गरिएको छ त्यसलाई तैँले स्पष्ट रूपमा बुझ्‍न सक्‍नुपर्छ। म को हुँ भनी बुझ्‍न के तँ सक्षम छस्? तँमा के कमी छ त्यसको आधारमा तैँले खाने र पिउने गर्नु, र मेरो वचनद्वारा जिउनु महत्त्वपूर्ण छ! मेरा हातहरूलाई पहिचान गर् अनि गुनासो नगर्। यदि तँ गुनासो गर्छस् र तोडिएर जान्छस् भने, तैँले परमेश्‍वरको अनुग्रह प्राप्त गर्ने मौकालाई गुमाउन सक्छस्। मसँग निकट भएर थालनी गर्: तँमा के कमी छ, र तँ कसरी मेरो नजिक आउनु र तैँले मेरो हृदयलाई बुझ्‍नुपर्छ? मानिसहरू मेरो नजिक आउन कठिन मान्छन्, किनभने तिनीहरूले आफैलाई त्याग्‍न सक्दैनन्। तिनीहरूका स्वभाव सँधै अस्थिर हुन्छ, लगातार तातो र चीसो भइरहन्छ, र मिठासलाई अलिकति चाख्‍ने बित्तिकै यी मानिसहरू अभिमानी र आत्म-सन्तुष्ट भइहाल्छन्। कतिपय मानिसहरू अझै बिउँझेका छैनन्; तैँले भन्‍ने कुराले तँ को होस् त्यस कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ? यसको कति जति आत्म-प्रतिरक्षा हो, यसको कति जति अरूको अनुकरण हो, र यसको कति जति नियमहरू पछ्याउने काम हो? तैँले पवित्र आत्माको कामलाई बोध गर्न वा बुझ्‍न नसक्‍नुको कारण भनेको मेरो नजिक कसरी आउने सो तँलाई थाहा नहुनु हो। बाहिरपट्टि, तैँले आफ्‍नै र आफ्नो मनको धारणाहरूमा भर परेर अनेक कुराहरूका बारेमा विचार गरिरहेको हुन्छस्; तँ गोप्य रूपमा सानातिना युक्तिहरूको अनुसन्धान गर्छस् र त्यसमा संलग्‍न हुन्छस्, अनि तैँले तिनलाई बाहिर समेत ल्याउन सक्दैनस्। तैँले पवित्र आत्‍माको कामलाई साँचो रूपमा बुझ्दैनस् भन्‍ने यसले देखाउँछ। यदि कुनै कुरा परमेश्‍वरबाट आउँदैन भन्‍ने तँलाई साँच्चिकै थाहा छ भने, खडा भएर यसलाई इन्कार गर्न तँ किन डराउँछस्? मेरो लागि कति जना खडा भएर बोल्‍न सक्छ? पुरुषार्थ क्षमताको अलिकति भाग पनि तँमा छैन।